Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo booqasho ku tegey magaalada Mekelle - Home somali news leader
Home NEWS Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed oo booqasho ku tegey magaalada Mekelle
Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed oo booqasho ku tegey magaalada Mekelle
Ra’iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa booqday magaalada xarunta u ah ismaamulka Tigrey ee Mekelle markii ugu horeysay tan iyo markii ay ciidamada federalka Ethiopia qabsadeen 29kii bishii aynu ka soo gudubnay.
Qoraal uu soo dhigey bartiisa Twitterka ayuu Abiy Ahmed ku sheegay in uu kula kulmay Mekelle taliyaasha ciidamada milatariga iyo maamulka cusub ee gobolka Tigrey dhowaan ay u sameysay dowlada Ethiopia.
“Biyihii iyo korontadii dib ayay ugu soo laabteen Mekelle,ciidamaduna waxa ay ku raadjoogaan madaxdii jabhadii TPLF.”ayuu qoraalkiisa ku sheegay Abiy Ahmed.
Booqashada Abiy ee magaalada Mekelle aya ku soo beegantay xilli uu caasimada dalka Ethiopia uu gaaray ra’iisul wasaaraha Abdalla Hamdok isagoo doonayay inuu heshiis xabad joojin ah dhex dhigo dowlada Ethiopia iyo ururka TPLF.
Hase yeeshee dowlada Ethiopia ayaa ku gacan seyrtey iyadoo sheegtay inuusan jirin dagaal socda loona baahneyn xabad joojin.
booqashada abiy ee mekelle
Previous articleDowlada Federalka oo u oggolaatay ardayda Puntland in shahaadada Dugsiyada Sare
Next articleDowladda Soomaaliya oo warqad ka dhan ah Kenya u gudbisay IGAD